एनबी बैंकले ७९ करोड कमायो, कति देला लाभांस ? - www.sahayatra.com एनबी बैंकले ७९ करोड कमायो, कति देला लाभांस ? - www.sahayatra.com
Home > Eco > एनबी बैंकले ७९ करोड कमायो, कति देला लाभांस ?
२१ साउन, काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१०७२ मा ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ करोड रुपैयाँले बढी हो अघिल्लो वर्ष बैंकले ७४ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४३ करोड र रिजर्भ २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत ०७४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने घोषणा गरेको छ । यो बैंकलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न तीब्र दबाब छ ।
चुक्ता पुँजी बढाउने उद्देश्यले बैंकले आफ्नो नाफा र रिजर्भबाट ४० प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिनसक्ने देखिन्छ । तर, बैंकको एनसीसी बैंकसँग मर्जरको छलफल भइरहेको छ । एनसीसी वा अन्य बैंकसँग मर्जमा जाने पक्कापक्की भयो भने बैंकका सेयरधनीले अधिकतम बोनस सेयर नपाउन पनि सक्छन् ।
खुद व्याज आम्दानी र संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता (राइटव्याक)मा भएको वृद्धि नै बैंकको नाफा वृद्धिको मूख्य आधार हो । ०७१ असार मसान्तमा ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रखेको खुद व्याज आम्दानी ०७२ असार मसान्तमा बढेर १० करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको बिहीबार प्रकाशित अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, ०७१ असार मसान्तमा ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ राइटव्याक भएकोमा ०७२ असार मसान्त्मा ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राइटव्याक भएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा जुनरुपमा कारोबारको वृद्धि भएको थियो त्यसअनुरुप बैंकको नाफा बढ्न सकेको छैन । यस अवधिमा २५ अर्ब ७० करोड रहेको निक्षेप बढेर ३३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा बढेर २५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँले लगानी बढाएको छ । कूल कर्जामा घरजग्गा क्षेत्रतर्फको कर्जाको हिस्ता ६.२८ प्रतिशत छ ।
०७२ असार मसान्तमा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जामा निस्क्रीय अर्थात खराब कर्जाको मात्रा १.३२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यस्तो मात्रा १.३५ प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, .अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्याजदरबीचको अन्तर केही बढे पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै छ । ०७१ असार मसान्तमा ४.३२ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दर ०७२ असार मसान्तमा ४.४३ प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ ३१ रुपैयाँले बढेको छ । ०७१ असार मसान्तमा १ सय ६९ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर नेटवर्थ ०७२ असार मसान्तमा २ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी भने २ रुपैयाँले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३५ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष ३३ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकले लगानीकर्ताको लगानीमा १६.१७ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ ।
Item Reviewed: एनबी बैंकले ७९ करोड कमायो, कति देला लाभांस ? Rating:5Reviewed By: Amrendra yadav